News Collection: जीवन किन रेखादेखि भाग्छन्?
जीवन किन रेखादेखि भाग्छन्?
अन्दाजको फिल्मको 'सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला...' मा नाचेको नृत्य यतिबेला टेलिभिजनमा निकै बज्ने गरेको छ। यो गीतसँगै नायिका रेखा थापा र नायक जीवन लुइँटेलको गीतजोडीलाई पनि दर्शकले निकै रुचाएका छन्।
तर, अभिनेता लुइँटेल भने अभिनेत्री थापाको जोडी बन्नेतर्फ इच्छुक देखिएका छैनन्। यो दृष्य हो फिल्म काठमाडौंको प्रिमियर सोको। राजधानीको कमलपोखरीस्थित सिटी सेन्टरको बिग सिनेमा हलको प्राङ्गनमा करिब एक घन्टाको बसाइँमा रेखाले पटकपटक जीवनको हात समातिन्। जतिपटक रेखाले जीवनको हात समातिन् उतिपटक रेखाबाट आफ्नो हात छुटाउने प्रयास जीवनको हुन्थ्यो। रेखा पटकपटक जीवनसँग टाँस्सिएर हात समाउँदै कुरा गर्न चाहिरहेकी थिइन्। तर, जीवन भने उनीसँग एकछिन बसेपछि फेरि रेखाबाट आफ्नो हात खुस्काएर अरू सिनेकर्मीसँग गफ गर्न पाखा लाग्थे। यसै क्रममा एकपटक त जीवनले जबरजस्ती आफ्नो हात रेखाबाट छुटाए। आधा दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा सँगै काम गरेका रेखा र जीवनको जोडी फिल्म अन्दाजबाट निकै हिट बनेको छ। अन्दाजमा काम गर्दा रेखा र जीवनका नाममा थुप्रै रोमान्सका कथा सञ्चारमाध्ययममा आए। तथापि, यी जोडीले भने ती कथालाई गसिपका रूपमा उडाए। आखिर रेखाबाट जीवन किन टाढा भाग्न चाहन्छन् त? फिल्म काठमाडौंको प्रिमियरमा सिनेकर्मी र सञ्चारकर्मी यही प्रश्न उठाइरहेका थिए।